Inkqubo yoLawulo lweNtloko ye-A-180E ene-USB Co ...
I-H2000 yeNethiwekhi yokuKhangela kwiKhabhinethi
IKhabhinethi yokhuseleko lwe-H3000 ye-H3000
IOfisi kunye neHotel Self Service Keys Machine enesazisi sobuso kunye neFingerprint
Ukuqwalaselwa kobuso obuphucukileyo kunye nokuqinisekiswa kokuphononongwa kweminwe yemvelo ukubonelela ngokuqinisekiswa okukodwa kunye nokuphindwe kabini
Landwell ibhokisi ekrelekrele ephambili yolawulo lwenkqubo yolawulo lwekhabhinethi
IKhabhinethi yoLawulo oluPhambili eLandewell kunye neeLockers ziyilelwe ukugcina izitshixo, izixhobo, okanye izixhobo zikhuselekile, kwaye zizilawule ngendlela egadisiweyo negunyazisiweyo. Ezi khabhathi zilungileyo zidibanise iikhabhathi eziphambili kunye neelokhari kunye. Iikhabhathi zinokuvulwa kuphela ngekhadi elisondeleyo leRFID (transponder), okanye / kunye nekhowudi yePIN, okanye / kunye nokuchongwa kweminwe. Abasebenzisi bayakwazi ukuvula kuphela ezo zitshixo kwaye bafumane kuphela ezo zitshixo bagunyazisiweyo.
• Itekhnoloji eyaziwayo yeRFID ephambili yenza ukuba inkqubo isebenze ngokuzenzekelayo
Iglasi ye-PMMA okanye ucango lwentsimbi olungenasici ukwenza amaqhosha akhuseleke
Ngabasebenzisi abagunyazisiweyo kuphela abanokufikelela kumaqhosha abelweyo ngexesha elithile
Amaqhosha aphantsi kolawulo ngehardware kunye nexesha lesoftware
• Idityaniswe nenkqubo ezininzi zokulawula ukufikelela
Inkqubo yolawulo oluphambili lwe-Landewell isebenzisa ubuchwephesha be-RFID yanamhlanje ukukunceda uququzelele amaqhosha emihla ngemihla kunye nezinto ezixabisekileyo.
• Itekhnoloji eyaziwayo yeRFID ephambili, yenza ukuba inkqubo izenzekele ngokupheleleyo
• Iglasi ye-PMMA okanye ucango lwentsimbi engenasici ukwenza amaqhosha akhuseleke ngakumbi
Abasebenzisi abagunyazisiweyo kuphela abanokufikelela kumaqhosha abelweyo ngexesha elithile
Amaqhosha aphantsi kolawulo ngehardware kunye nexesha langempela lesoftware
I-H2000 inokuqinisekisa ukhuseleko lweeasethi zomsebenzisi, gcina izitshixo apho uzifuna kakhulu, kwaye uzithathe nanini na, naphi na
ayinakusetyenziswa ngaphandle kwemvume kwaye inokuthatha isigqibo sokuba ngoobani abasebenzisa iiasethi ngexesha elithile. Inciphisa iindleko zolawulo kwaye inikezela ngolawulo olufanelekileyo kwiinkqubo ezibalulekileyo.
Inkqubo yokuLawulwa kweNkqutyana eyi-A-180E ene-USB Connector
A-180E ibonelela ngokugqibeleleyo kwezitshixo ezili-18 kunye nexabiso elincinci lenkampani yakho. Abasebenzisi abagunyazisiweyo kuphela abanokufikelela kwizitshixo ngoseto lwegunya. Ngaphezu koko, abasebenzisi abagunyazisiweyo bazichaza (ngaphakathi kwexesha elithile) ngekhadi lomsebenzisi, iphasiwedi kunye neminwe yeminwe kwisiphelo. Zonke iinkcukacha ezinje ngokuthatha nokubuyisa izitshixo ziya kujongwa ngokupheleleyo kwiingxelo ezahlukeneyo.
I-keybox-8 Ibhokisi encinci enesistim yoLawulo kunye nesitshixo
Isatifikethi se-Landewell CE Ulawulo oluphambili IKhabhinethi yamkela iteknoloji ye-RFID yenza izitshixo zakho kunye neeasethi zikhuseleke ekusebenziseni kwakho, Ulwazi lurekhodelwa umsebenzisi kunye nee-asethi, kwaye uvelise ingxelo yeeasethi ezixabisekileyo.
Inkqubo yeLandewell yoLawulo lweeNkqubo eziPhambili zeBhokisi yamkela iteknoloji yeRFID ekulula ukuyisebenzisa. ukurekhoda ngokuchanekileyo ukusetyenziswa kwesitshixo (igama, igama eliphambili, ixesha lokubuya, njl. njl.) Gcina izitshixo apho uzifuna kakhulu, kwaye uzithathe nanini na, naphi na.
• Iglasi ye-PMMA okanye ucango lwentsimbi olungenasici ukwenza amaqhosha akhuseleke ngakumbi
• Abasebenzisi abagunyazisiweyo kuphela abanokufikelela kumaqhosha abelwe ngexesha elithile
• Amaqhosha aphantsi kolawulo ngehardware kunye nexesha langempela lesoftware
Ibhokisi yenkqubo yoLawulo oluKhuselekileyo eLandewell Wall ingaqinisekisa ukhuseleko lweeasethi zomsebenzisi, ezingenakusetyenziswa ngaphandle kwemvume. Yonke imisebenzi ibhaliwe kwaye umsebenzisi uthatha uxanduva lokhuseleko lweeasethi.
I-keybox-64 Uninzi lweKhabinethi eKhiyekileyo yokuKhiya
I-Landewell yeKhabinethi eNkulu eneNkqubo yoLawulo lweDijithali ukusuka kukhetho olulula olukhuselekileyo lokugcina ukuya kwinqanaba lokushishina kwezixhobo ezibiza kakhulu okanye ezibuthathaka, ibonelela ngendlela enobuchule nenamandla yokulawula, ukulandelela kunye nokunika ingxelo ngokusetyenziswa kweyona asethi ibalulekileyo.
IKhabinethi ephambili yeLandewell eneNkqubo yoLawulo lokuDibanisa iyathengiswa kwaye ilungelelaniswe ukuze ilingane nazo zonke izicelo. Isebenzisa izisombululo zobuvulindlela ukulawula ezona ndawo zibalulekileyo kuwo nawuphi na umbutho.
Ulawulo lweKhompyutha eLandewell kwiKhabinethi yokuLawula onke amaqhosha ezitshixo ngqo ukuze onke amaqhosha akwazi
ilawulwe ngengqiqo. Yindlela elungileyo yokukunceda usombulule iingxaki eziphambili zolawulo. ukunciphisa umngcipheko kunye neendleko zolawulo, ukuphucula ukusebenza ngokukuko.
Inkqubo yolawulo oluphambili lwe-Landewell isebenzisa ubuchwepheshe be-RFID obuphambili ukukunceda uququzelele amaqhosha emihla ngemihla kunye nezinto zexabiso.
Inkqubo yokulandela umkhondo weofisi yeyona nto iphambili
Eyona ndlela iphambili kwi-plug-and-play yinkqubo ephambili yolawulo.
Itekhnoloji yeRFID efake isicelo idityaniswe ngokupheleleyo nenkqubo ye-Android, idibanisa amaqhosha angama-26 kunye noyilo lwe-miniaturization, eyenza ukuba ifaneleke ngakumbi kumashishini amancinci naphakathi ukuze ayisebenzise.
Eyona nto iphambili ilawulwa kwiscreen sokuchukumisa i-Android nesoftware efakwe kwangaphambili, amaqhosha agcinwe ngaphakathi kwiindawo ezinokufikelelwa anokufikelelwa kuphela ngabasebenzisi abagunyazisiweyo kunye namaxesha achazwe kwangaphambili acwangciswe kwisoftware.
IKhabinethi ephambili etshixwayo, IKhabhinethi Yolawulo Oluphambili, Inkqubo yoLawulo lwebhokisi encinci kunye nesitshixo, Ibhokisi yoKhiye woLawulo, IKhabhinethi eKhulu yokuGcina, Ibhokisi ephambili ejingayo,